October 2008 Blog Posts (67)
နှစ်ပဲတစ်ပြား အုပ်စုကလေးပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ ညီညွှတ်ခြင်း ဆိုသော အလုံးကြီးကိုတော့ ပြောလိုသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ဝီကီ ဝိုင်းတော်သားများ လွပ်လပ်စွာ ပြောဆိုတပ်ကြလျှင် ကျနော်အနေဖြင့် ဤညီညွှတ်ခြင်း အကြောင်း ပြောစရာမလို။ ဘားခန်းမှာ အာရွှင်သလောက် အရေးကြလျှင် နူတ်စေးသည်။ နူတ်စေးရခြင်းမှာ အကြောင်းရှိပေသည်။
ပဋ္ဌမ အကြောင်းမှာ ငါပြောလိုက်ရင် ပိုဆိုးသွားမလား ဟု၍ ဖြစ်သည်။ ပွက်လောရိုက်သွားမည်။ တစ်ရောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်မည်။ ငြိမ်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်။… Continue
Added by Okisan on October 31, 2008 at 2:30am —
ချစ်တယ် ဗိုင်းရပ်ကြောင့် မော်နီတာ စကင်ကြီးမဲသွားတာကို နဂိုမှုလအရောင်တိုင်း
ပြန်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ် ပြန်လုပ်ရမလားခင်ဗျာ့ ။
သားထူး Added by tharhtoo on October 30, 2008 at 8:56pm —
အကိုတို့ရေ။ ကျွန်တော့်စက်တလုံးမှာ ပြဿနာ တခု တက်နေလို့။ ဘယ်လိုပြဿနာလဲဆိုတော့ ဗိုင်းရပ်စ်လား ဘာလားကို မသိတော့ ပါဘူး။ အမြဲတမ်းလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ start menu က ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ တခုခု ကို pointer ထောက်လိုက်ခါရှိသေး။ တခါတည်း ပွင့်လာတာပဲ။ ပြီးရင် Right click လုပ်လို့လဲ မရဘူး။ အဲဒါအတော်လေးကို ခေါင်းစားနေပါတယ်။ အဲဒါလေး ဖြေပေးကြပါဦး။ Added by kothaung on October 30, 2008 at 5:00pm —
ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာမှာ ရှိတဲ့ အန်တီဗိုင်းရစ်က AVG FREE Edion ပါ ယခုပြဿနာက ဒီဆော့ဝဲလ်ရဲ့ အိုင်ကွန်က
Task bar မှာမပေါ်ဘူးဗျာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းသုံးရင်တော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး ဒက်စတော့မှာရှိတဲ့
အိုင်ကွန်ကို ကလစ်ပြီးပြန်ဖွင့်သုံးလို့ရပါတယ် တစ်ခြားလူတွေသုံးတဲ့အခါ ဒီပြဿနာကို မသိတော့ အင်တာနက်ကို
ဒီအတိုင်းသုံးတော့ အတော့ကို စိုးရိမ်ရတာပေါ့ဗျာ ခဏ ခဏ ဆိုင်ကိုပြေးပြီး ပြနေရတော့ ကိုက်မကျဘူးဗျာ့
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ… Continue
Added by tharhtoo on October 30, 2008 at 11:54am —
ှုHow should i start Linux OS? I wanna to learn Linux OS. Please advise me. Added by Aung Phyo Khant on October 30, 2008 at 10:48am —
စကီလား or စကိုင်လား (Terminology)
kaspersky ကို ကက်စပါစကိုင်း လို့ အသံထွက်လား၊
ကက်စပါစကီ လို့ အသံထွက်လား။
အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တွေငြင်းခုံကြတာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Software ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ မေးကြည့်တော့ သူက
ကာပါစကီ လို့ ဆိုလို့ ပိုလို့တောင် စားနေရပါတယ်။ ခေါင်း... ခေါင်း ..း-I
ှSo, Which one is Right? plz answer me, bros? Added by Arch on October 29, 2008 at 9:12pm —
ALan - 幸せの鐘 - ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ
ALan - 幸せの鐘
ALan - 幸せの鐘 - shiawase no kane
雨が降り　大地はそれを　受け入れる - ame ga furi daichi wa sore wo ukeireru
မိုးတွေကစရွာလာ ကမ္ဘာမြေကြီးက မိုးရေတွေကို လက်ခံပေးတယ်
喜びや　悲しみなどと　色を付けずに - yorokobi ya kanashimi nado to iro wo tsukezu ni
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို အရောင်မခွဲခြားပဲနှင့်
色を付けずに - iro wo tsukezu ni… Continue
Added by Mark on October 29, 2008 at 1:56pm —
virus lo chin loz
a ko tot yay kyanaw ko virus lay pay par own byar
yay mail ko kyanaw fri 1 yout hack twar loz par
kyanaw ko virus lay myar shi yin pay kya par
link ko click lote lite tar ne` tan ka ne` win twar te` virus myo ko lo chin tal byar Added by MgThant on October 28, 2008 at 7:06pm —
How to Change Gtalk Background
you need to install My Theme Beta1.0.10. You can download from the following link.
My Theme Beta 1.0.10(822KB)
After your installation,
How to apply My Theme ?
1. Close the chat windows (if any).
2. open the gtalk settings, Appearance and then to choose the Theme at chat Theme in the Appearance .
How to change the Background Image of chat window ?
Start => the desired image => choose the picture… Continue
Added by kespar on October 28, 2008 at 5:37pm —
Shutdown Shotcut လုပ်ချင်သူများအတွက်
Desktop (R.C)=> New => shortcut => Browse (on the shutdown shortcut) => C:\_windows\_system 32\_shutdown.exe လုပ်ပေးလိုက
ပြီးရင်တော့ Command လေးတစ်ခုထည့် ပေးရပါမယ်
shutdown shortcut => properties(R.C) => Command Tab => C:\_windows\_system 32\_shutdown.exe -s -t now ဆိုတာလေး ဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ....... ( "Warning" Space လေးတွေပါပါတယ် )
But " now " ဆိုတဲ့နေရာမှာ " 60 second " လို့ ပေးလိုက်မိရင် Box လေး
တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ......… Continue
Added by kespar on October 28, 2008 at 5:15pm —
No Comments ဒါလေးကိုသိချင်ပါသည်
ကျွန်တော် သိချင်သော အကြောင်းအရာမှာ ဥပမာ Game ဆိုင်ဆိုကြပါစို့။ စက်တွေအများကြီးကို အကုန်လုံးအင်စတော လုပ်စရာမလိုပဲ main server ကနေ clone ရိုက်ပြီး ကျန်တဲ့စက်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က အဲဒီဘက်တွေမှာ အားနည်းပါသည်။ သိတဲ့သူ အကို အမများအနေဖြင့် ကျွန်တော်အလွယ်တကူနားလည်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြစေချင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါသည်။ Myanmar IT Professions ၀ိုင်းတော်သားများ ကျန်းမာကြပါစေ။ Added by kothaung on October 28, 2008 at 4:18pm —
java tutorial ကို ဘယ် site မှာ free ရနိုင်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါ။
Core java ကိုသင်ကြားဖူးပြီး ဆက်မလေ့လာဖြစ်ပါ။ java programmer အဖြစ် ရပ်တည်လိုပါသည်။ လမ်းညွှန်ပေးပါ။ Added by java on October 27, 2008 at 10:18am —
ကျွန်တော့်စက်မှာ mozilla firefox ကို ဖွင့်ရာမှာ hang နေပါသည်။
အဲဒီလိုဖြစ်နေပါသည်။ အဲဒါ မဟန်းအောင်၊ ပြီးတော့ မြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။ Added by kothaung on October 26, 2008 at 7:00pm —
ကျွန်တောက ဆူဇီနဲ. နေတယ်ဗျ။ သိတဲ.သူများ ရေးကြပါဦး။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုးစားဆဲပါ။ Added by tuntunwin on October 26, 2008 at 2:29pm —
If I were sky, u would beabird.
If I were sea, u would beafish.
If I were flower, u would beabee.
If I were tree, u would beamonkey. Added by popegyi on October 24, 2008 at 11:46pm —
Gtalk ka win loz ma ya bu phit nay tal be` lo lote ya ma le` ma thi bu byar
web site twaeakone lone le` open loz ya tal connection le` kg ye` tar ne` bar phit tar le` ma thi bu byar
Gtalk connection mar le` proxy address ko phi htar ye` tar ne` ma ya bu phit nay tal Added by winmintun on October 24, 2008 at 1:40pm —
How to Combine Softwares?
ကျွန်တော် Software တွေကို CD တစ်ချပ်ထဲမှာ စုထည့်ထားတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပေးနိုင်မယ်ဆို ပြောပေးစေချင်ပါတယ်။ Added by Arch on October 24, 2008 at 1:13pm —
Geek Songs (by Basshunter)
အားလုံးပျင်းနေမှာစိုးလို့ အပျင်းပြေ မြူးမြူးကြွကြွလေးတွေ နားထောင်လို့ရအောင် Basshunter ရဲ့ သီချင်းတွေ လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာဂိတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွီဒင်ဂိပါ။
Geek Culture နဲ့ နာမည်ကျော်လာတဲ့ ဆွီဒင်က Techno အဆိုတော် သို့ DJ တစ်ယောက်ကို မသိသေးရင် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
သူ့ကို BassHunter လို့ လူသိများပါတယ်။သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် အယ်လ်ဘမ် အမည်က LOL <(^^,)> လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Boten Anna ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး E-mail ကနေတစ်ဆင့် သူငယ်ချင်းတွေ… Continue
Added by Zaw Thet on October 24, 2008 at 1:00am —
kaspersky 2009 Keyဖြေမရလို့
Hi! IT bros, ကျွန်တော် Kaspersky 2009 တင်တာ၊ တင်လို့တော့ရတယ် but အခွေထဲမှာ ပါတဲ့ Key တွေနဲ့ ဖြေတာမရဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ Kaspersky 2009 Key ကို။ နောက်ပြီး Update ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဘယ်Site မှာ Download ရနိုင်မလဲ။
နောက်တစ်ခုက Problem ပါ။ ကျွန်တော့် PC ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Happy Birthday ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ် Message အနေနဲ့ပါ။ အဲ့ဒါက Virus လား။ ဘာလဲ၊ ကွန်ပြူတာလေး တစ်လုံးရှိပါတယ် ...problem တွေက အမျိုးမျိုးဘဲ။ ဖြေရှင်းပေးလို့ရရင် ဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ Added by Arch on October 23, 2008 at 8:43pm —
Memory stick ထဲ မှာ Zip file တွေ ဖြစ်သွားလို့
Hi! Myanmar IT Pros များကို လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်က IT သမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ But ITကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘလောခ့် တင်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် နယ်ပယ်လည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ But ကျွန်တော့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ problem တွေကိုဖြေရှင်းဖို့ bros တို့ကိုသာ အားကိုးရမှာ။
အချစ် Problem ကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကိုပြည့်စုံကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ခေါင်းခဲနေတာ ကြာပြီ။ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ။
အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ Problem က Memory stick ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ File နာမည်အတိုင်း Zip file… Continue
Added by Arch on October 23, 2008 at 8:27pm —